postmarketOS inototsigira 200 nhare mbozha | Linux Vakapindwa muropa
Kwemakore anodarika gumi izvozvi, musika wekufambisa wakadzorwa nemidziyo inomhanya iOS uye Android. Vazhinji vakaedza kutora chigaro kubva kwavari, asi parizvino, pakukwanisa, ivo vakakwanisa kuita ruzha. Maitiro anotaridzika kunge anogona kuchinja zvishoma mune ramangwana, nekuda kwema mobile operating system senge postmarketOS, uyo anoshandisa KDE software zvakanyanya. Uye zvimwe izvozvi, izvo zviri kuwedzera kusvika kumamwe madivayiri.
Maererano ne mushumo neTuxPhones, postmarketOS ikozvino inogona kumhanyisa pane anopfuura mazana maviri emidziyo, iyo inosanganisira mafoni uye mapiritsi. Kuti unzwisise iyi feat, inofanirwa kutarisirwa kuti iko kushanda sisitimu kwakazvarwa muna2017 uye yatove inotungamira nharembozha sisitimu inoshanda kubva kuLinux. Kupfuurirazve, sisitimu inoshanda seyakakurumbira seUbuntu Kubata parizvino inongotsigira zvishandiso makumi maviri nezviviri, iine mamwe gumi nemana ari kuitika.
postmarketOS inounza KDE software kune mazana maviri mafoni
Zvizhinji zvekuda zvinokonzerwa nenzira dzekumisikidza, maturusi uye magwara ekutora postmarketOS yakaiswa pane edu nhare mbozha. Mukuwedzera, zvakare inotibvumidza kusarudza pakati penzvimbo dzemifananidzo Plasma (Nhare), MATE, GNOME, Xfce uye Phosh. Sezvo kana izvo zvaive zvisina kukwana, zvinogona zvakare kuiswa pane iyo iPhone 7 / Plus, uko Wayland inosanganisirwa, zvese nekuda kweProjekti Insanity.
Kana iwe uchifarira kuyedza postmarketOS pane yako nhare mbozha, chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuita kuenda kune yako Wiki peji y ona kana mudziyo wako uchitsigirwa. Kana zvirizvo, kubva kune iro peji peji isu tinokwanisa kuwana iyo Wiki yeimwe neimwe yezvigadzirwa, panenge paine chinongedzo kune iyo yekuisa gwara.
Semafungiro angu, ndinofanira kutaura kuti mashandiro akaita seaya anondibata, asi ndinofunga haizove sarudzo yakanakisa kana tisingakwanise kumhanyisa mamwe mafomu ekushandisa. Chero zvazvingaitika, iri kushanda saka icho unogona kumhanya Android maapplication, iyo inogona kuchinja mitemo yemutambo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux-based mobile operating system postmarketOS inototsigira mazana maviri emafoni
Zvirokwazvo inopinda nemidzi, asi ichave yekugadzirisa sei? Saka kuti iwe usave nematambudziko akafanana neyetsika maRoms, ese ari mukamera, WiFi, chigunwe kuverenga uye nezvimwe. Zvese inyaya yekumirira. Asi ndinoda. Uye zvimwe kana zvichipa mukana wekumutsidzira zvekare ma mobiles. Uye vamwe vakamira kunge windows nhare